भोट हाल्न मलामीदेखि जितु नेपालको घरको २३ भोटसम्म ! – Everest Dainik
भोट हाल्न मलामीदेखि जितु नेपालको घरको २३ भोटसम्म !
काठमाडौं, मंसिर २१ । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अन्तर्गत निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उल्लासमय रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा र २५६ प्रदेशसभाका उम्मेदवारका लागि मतदान भएको छ।
विहान ७ बजेबाट शुरु भएको मतदान साँझ ५ बजे सकिएको हो ।
मतदानका दिन केही स्थानमा बम विस्फोटका घटना भए भने केही स्थानमा झडप समेत भएको छ ।
हेरौं आज दिनभर के कस्ता महत्वपूर्ण घटना भए ?
शव बोकेरै मतदान गर्न पुगे मलामी
पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–७, मैनादीको हर्केडाँडाकी एक महिलाको मृत्यु भएपछि शव बोकेरै मतदान केन्द्रमा मलामी मतदान गर्न पुगेका छन् ।
हर्केडाँडाकी १०१ वर्षीया लिलाकुमारी गैरेको आज बिहान मृत्यु भएपछि मलामी शव बोकेर नै मतदान केन्द्रमा पुगेर मृतकका छोरा युद्धराज गैरेले बतासे मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् । उनीलगायत १६ जना मलामीले बतासे मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् भने रिब्दिकोट छहरा गापा–५ मुजुङका विष्णु काफ्लेले मुजुङको बगैँचाबाट मतदान गरेका छन् ।
१ सय १९ वर्षीयाको मतदान
डडेल्धुरामा १ सय १९ वर्षीया वृद्धाले मतदान गरेकी छिन् । अमरगढी नगरपलिका वडा नं ६ भजनपुर बस्ने ११९ वर्षीय पार्वती देवी खड्का मतदान स्थल पुगि मतदान गरेकी हुन् । डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका वडा नं.६ को भजनेउटा चौतारो मतदान केन्द्र (ख) बाट उनले मतदान गरेकी हुन् ।
त्यस्तै कास्कीको मादी गाउँपालिका–८ स्थित धु्र्व मावि मतदान केन्द्रवाट १०२ वर्षीय वामदेव सापकोटाले मतदान गरेका छन् ।
सीके राउत समातिए । मतदान भइरहेको दिन बिहीवार प्रहरीले जनकपुरबाट सिके राउतलाई पक्राउ गरेको छ । निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै राउतलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकास्थित माछाबजार चोकमा रहेको भाडामा बस्दै आएको डेराबाट राउतलाई पक्राउ गरिएको हो ।
सम्बन्धित् समाचार गाउँपालिकाकाे अध्यक्षमा पहिलो पटक महिला विजयी
राउतका कार्यकर्ताले चुनाव बहिस्कार गर्ने अभियानै चलाएका थिए । राउत पनि चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रचण्ड परिवारको भोट
पुत्र वियोमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिवारले मतदान गरेका छन् । आफू उम्मेदवार रहेको चितवनबाट प्रचण्ड परिवारले मतदान गरेका हुन् ।
‘प्रचण्ड’ले जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका–१४ भीमसेनगरस्थित आधारभूत शान्ति प्रावि केन्द्रबाट मतदान गरे ।
प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल र कान्छी छोरी गंगा दाहालले पनि सोही केन्द्रबाट मतदान गरिन् भने माइली छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले निमावि सुन्दरबस्ती मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छिन् ।
सेतो कपडामा वीना मगरको भोट
कञ्चनपुर क्षेत्र नं.१ की उम्मेदवार बीना मगरले भोट खसालेकी छिन् । पुनर्वास—३ रामवस्तीस्थित गोरखा आधारभुत विद्यालयबाट उनले मतदान गरेकी हुन् । प्रकाशको निधन भएपछि उनी सेतो पछ्यौरामा देखिने गरेकी छिन् ।
जसले आफैलाई भोट खसाल्न पाएनन्
निर्वाचनमा केही ठूला नेताले आफैलाई मत दिने सौभाग्य पाए तर केहीले चाहिँ आफैलाई मत दिन पाएनन् । मत आफ्नो नामावली जहाँ छ त्यहाँबाट मात्रै खसाल्न पाइन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवासम्मले आफैलाई मत दिन पाएनन् ।
त्यस्तै माधवकुमार नेपाल, कृष्णबहादुर महरा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, रवीन्द्र मिश्र, दमननाथ ढुंगाना, सुरेन्द्र कार्की, झक्कुप्रसाद सुवेदी, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताले आफू उम्मेदवार रहेपनि आफूलाई मत खसाल्न पाएनन् ।
भोट खसालेर फर्कदै गरेका ८० वर्षीय वृद्धको मृत्यु
पाल्पा रामपुर नगरपालिका–६ को दरैठाटी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेलगत्तैे एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रामपुर नगरपालिका–६ का ८० वर्षीय झुलबहादुर कुमाल रहेको सोही वडाका वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए । दमको रोगी रहेको कुमालले छोराको सहाराले मतदान गरेका थिए । मतदान गरेलगत्तै घर फर्कने क्रममा मतदान केन्द्र नजिकै उनको मृत्यु भएको हो ।
सम्बन्धित् समाचार फागुन १३ गते सिइओ अवार्डको आवेदन भर्ने अन्तिम दिन
कोही भोट हाल्नै नगएको बुथ
कतिपय ठाउँमा भने मतदाताहरु मतदान गर्न गएनन् । सप्तरीको महदेवा गाउँपालिकाको महदेवास्थित प्रावि मतदान केन्द्रमा एकजना पनि मतदाता मत हाल्न आएका छैनन् ।
एमाले कांग्रेसबीच झडप
भक्तपुरको बालकोटमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने सूर्य्विनायक नगरपालिका–३ बालकोटस्थित गणेश आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो । एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच भएको ढुंगा हानाहानमा सर्वसाधारणका घरका सिसा फुटेका छन् ।
बुथ कब्जा गर्न खोजेपछि
अछामको चौरपाटी गाउँपालिकामा रहेको लुंग्रामा कांग्रेसले बुथ कब्जा गर्न खोजेपछि प्रहरीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको छ । कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
शीर्ष नेताको मतदान
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट केपी ओलीले भक्तपुर–२ बाट मतदान गरेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीले मकवानपुर पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले इलाम नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मी, एमाले नेता शंकर पोखरेलले दाङ एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम रावलले अछाममा मतदान गरेका छन् ।
अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिका ५ मथुरा मावि नेटाको ख केन्द्रमा मतपत्र च्यातिएको छ ।
केही मतपत्रमा मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरी पठाएको पाएपछि कांग्रेस समर्थकले वाकस तोडफोड गरेर मतपत्र च्यातेर आगो लगाएका छन्।
झडप र हवाई फायर
स्याङजामा वाम गठवन्धन र लोकतान्त्रिक गठवन्धनबीच झडप भएको छ । साविकको तुलसीभन्ज्याङ गाविसको भनव रहेको स्थानमा दुई पक्षबीच झडप भएको हो ।
सम्बन्धित् समाचार पिछडा वर्ग महासंघले सुरु गर्यो अनिश्चितकालीन रिले अनशन
मतदानको विषयमा दुई पक्षबीच सुरु भएको विवाद हातहालाहालको अवस्थामा पुगेपछि प्रहरीले हवाइ फायर गरेको थियो ।
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाको फुलपरासी बुथमा नेपाली कांग्रेस र राजपा कार्यकर्ताहरुबीच झडप भएको छ । झडपमा एक महिलासहित तीन जना घाइते भएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो ।
जीतु नेपालको घरको २३ भोट १
मतदानमा कलाकारको पनि सहभागी रहेको थियो । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी नेतृसमेत रहेकी अभिनेत्री रेखा थापाले चावहिलको पशुपति क्याम्पसबाट मतदान गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर तीनकी मतदाता केकी अधिकारीले अवेरगरि मतदानमा गएकी छिन् । उनी गोकर्णेश्वर मतदान केन्द्रकी मतदाता हुन् । हास्यकलाकार दीपकराज गिरीले काठमाडौंको दहचोकमा रहेको बुथबाट भोट खसालेका छन् ।
त्यस्तै अर्का हास्य कलाकार जितु नेपालले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई नरेफाँटमा रहेको कोटदेवी स्कूलबाट मतदान गरेका छन् । उनी आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसहीत मतदान स्थल पुगेका थिए । नेपालले आफ्नो परिवारमा २३ भोट रहेको र सवै एकैपटक गएर मत खसालेको बताए ।
पत्नीलाई भोट हाल्न गएनन् मोहनविक्रम
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह आफ्नी पत्नीलाई भोट दिन समेत गएनन् । उनकी पत्नी दुर्गा पौडेल प्युठानबाट बाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भएपनि उनी पत्नीलाई भोट हाल्न नगएका हुन् ।
सिंह आफ्नी श्रीमतीका लागि भोट माग्न प्युठानमा गएका थिए । उनले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा भाग पनि लिएका थिए । तर उनी अहिले भोट हाल्न गएनन् । सिंह अर्ध-भूमिगत नेता हुन् ।
ट्याग्स: Kathmandu, Second Phase Election